Maalinta Caafimaadka Adduunka - BBC Somali - Aqoon Guud
Maalinta Caafimaadka Adduunka
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 7 Abriil, 2013, 15:34 GMT 18:34 SGA
Dhiiga iska cabir ayaa ah talada ay soo jeediyeen maanta dhaqaatiirta Sooomaalida ee Muqdisho si looga hortago cudurka dhiig karka.
Dhiiga oo laiska cabiro ayaa ah siyaabaha lagu ogaan karo cudurka Dhiig Karka.
Magaalada Muqdisho maanta waxaa lagu xusay maalinta caafiimaadka adduunka, waxaa soo qaban qaabisay munsaasabadda wasaaradda Horumarinta Adeegga Bulshada, waxaana ka hadlay wasiiro, xildhibaano iyo dhaqaatiir.
Adeega caafimaadka Soomaaliya ayaa burburay markii ay dowladda dhacday labaatan iyo saddex sano ka hor. Waxaa aad ugu yar dhaqaatiirta iyo isbitaalada ay dadka u baahan yihiin, si ay isaga daaweeyaan cudurada halista ah iyo kuwa laga hortagi karo.
Dhaqaatiirta ayaa maanta dadka kula taliyay inay dhiiga iska cabiraan, si ay uga hortagaan cudurka Dhiig Karka ee ku badan waddanka oo dhimasho badan keena
Wariyaha BBCda Maxamed Ibraahim Macalimuu, ayaa Dr Abdikarim Caseyr Ali oo ka mid ahaa dhaqaatiirta xafladda ka hadashay waxaa uu ka wareystay, cudurka Dhiig Karka oo sanadkan qatarta caafimaad ee bulshooyinka ku haya halkudhig looga dhigay.